Izingxenye zensimbi ezishibhile ezinyathela ifektri nabaphakeli | I-Ouzhan
Izinto ezijwayelekile zokucutshungulwa kwensimbi yilezi: insimbi ehlanganisiwe, insimbi engagqwali, i-tinplate, insimbi yasentwasahlobo, ithusi nethusi, ingxubevange ye-magnesium, i-aluminium ingxubevange ebandayo, ipuleti elishisayo, ipuleti lashukumisa, ipuleti kagesi, i-aluminium ipuleti, insimbi engagqwali, ipuleti lethusi.
Umshini wensimbi wokunyathela wensimbi wokushaya ngenqubo okwenziwe ngokwezifiso izingxenye zensimbi
Ngokuvamile, imishini eyisisekelo ifaka i-Shear Machine, i-CNC isibhakela umshini / i-Laser, iPlasma, i-Waterjet Cutting Machine, i-Bending Machine, nemishini eyahlukahlukene yokusiza efana ne: Uncoiling Machine, umshini wokulinganisa, umshini wokuphazamisa umshini, umshini wokushisela amabala, njll. imishini kanye neqoqo eligcwele lemigqa yokukhiqiza. Ukunikeza ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso.
Izinzuzo ze-Ouzhan sheet stamping izingxenye
- Indlela yokunyathela ingathola imisebenzi yokusebenza enezimo eziyinkimbinkimbi futhi kube nzima ukuyenza ngezinye izinqubo, njengezingxenye ezincane zegobolondo. Ukunemba kobukhulu bezingxenye zokubanda ezibandayo kuqinisekisiwe yisikhunta, ngakho-ke ukuzinza kobukhulu kuhle futhi nokushintshana kuhle.
- Isilinganiso sokusetshenziswa kwempahla ephezulu, isisindo esincane, ukuqina okuhle namandla amakhulu wensimbi yokusebenza, nokusetshenziswa kwamandla okuphansi kunqubo yokunyathela, ngakho-ke inqubo yokutshala imali ngobuningi iphansi.
- Ukusebenza okulula, amandla aphansi okusebenza, okulula ukuyiqonda ukusetshenziswa kwemishini nokuzenzekelayo.
- Isakhiwo sesikhunta esisetshenziswe kwinqubo yokushaya isitampu ngokuvamile siyinkimbinkimbi, futhi umjikelezo wokuthuthuka mude futhi nokutshalwa kwemali kuphakeme.
Isevisi yokunyathela yensimbi eyenziwe ngokwezifiso ze-Ouzhan OEM-China Shanghai sheet sheet stamping parts manufacturer
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, izingxenye zokushaya izinsimbi zensimbi ezinemba kakhulu ezinekhwalithi ezinzile nezinokwethenjelwa zingacutshungulwa. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe. Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa kahle nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuphelele kwezingxenye zemishini yensimbi yensimbi. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo eshaywayo yensimbi inikezwe ngokuhambisana nezindinganiso zekhwalithi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singahlinzeka ngamanani entengo wokuncintisana wensimbi yokushaya isitampu yensimbi nemikhiqizo kumakhasimende ethu abalulekile.
Izindawo zokufaka izingxenye zezingxenye zensimbi yensimbi
1. Ishidi lensimbi lokushaya izingxenye zezimoto: kufaka phakathi izingxenye zokwakhiwa kwezimoto, izingxenye ezisebenzayo zezimoto, izingxenye zemishini yezimoto, ukudluliswa kwezimoto, njll.
2. Ishidi lensimbi lokushaya izingxenye ze-elekthronikhi: kufaka phakathi amadivayisi wokuxhuma, izixhumi, izingxenye zebhulashi, amatheminali kagesi, izingxenye ezinwebeka, njll.
3.Izingxenye zensimbi yensimbi eshaywayo yensimbi eshaywayo: Ikakhulukazi ifaka izingxenye ezinkulu zemishini yasendlini, ezinjengezingxenye zesibhamu se-tube electron, nezingxenye zemishini yasendlini encane, izingxenye ezahlukahlukene zesakhiwo kanye nezingxenye ezisebenzayo.
4. Uhlaka lokuhola lwesifunda oluhlanganisiwe lwe-IC: lufaka kakhulu ifreyimu yokuhola yedivayisi ehlanganisiwe nohlaka lokuhola lwesifunda oluhlanganisiwe, njll.
5. Umugqa wensimbi wensimbi yeshidi wensimbi: ikakhulu kufaka phakathi isigaba esisodwa uchungechunge lwemoto, isigaba esisodwa semoto yomgogodla, isigaba esisodwa esine-pole motor motor, uzibuthe unomphela we-DC motor core, i-motor motor core, ne-plastic stator core wait.
6. Ishidi lensimbi lokunyathela izinsimbi zensimbi kagesi: lifaka kakhulu ama-cores we-E-shaped transformer, ama-cores we-EI amise okwe-cores, ama-cores we-I-shaped transformer, namanye ama-chip core core.
7.Izinsimbi ezinyathela ukushisa kwamapayipi okushisa: ikakhulukazi zifaka amaphiko ezinsimbi ezishisa ukushisa, amaphiko ezinsimbi ezisebenza ukushisa, kanye nemaphiko okushisa umlilo.
Ukugxivizwa kwensimbi yeshidi nezinye izingxenye: ikakhulukazi kufaka izingxenye zezinsimbi zomculo, izingxenye ze-IT, izingxenye ze-acoustic nezekhamera, izingxenye zehhovisi zesimanje, kanye nehadiwe yansuku zonke.
Yini ukusetshenziswa kwezingxenye zensimbi yensimbi yensimbi
1. Izingxenye zokugxivizwa kwensimbi zansuku zonke nezasendlini: izidingo zansuku zonke ezinjengamabhodwe namapani, osinki, amaketela nezinto zikagesi zasendlini ezifana nemishini yokuwasha, ama-air conditioner, amafriji kanye nabapheki belayisi;
2.Izingxenye zezingxenye zensimbi yezimboni: igobolondo le-chassis, imishini yensimbi yemoto kanye nezingxenye zemishini yobunjiniyela;
3. Ukunyathela izingxenye zezingxenyekazi zekhompiyutha: izingxenye zezinsimbi zomculo, izixhumi, njll .;
4. Isitembu sezinsimbi esikhethekile se-Aerospace, imikhumbi nemikhumbi yasolwandle.
Izinzuzo zensimbi yokushaya insimbi yensimbi
- I-Ouzhan inomnyango okhethekile wokuhlola ikhwalithi, ngaphambi kokuthumela, ukuqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo ingaphakathi kobubanzi bephutha.
-High ukukhiqizwa umthamo futhi amanani abiza.
-Iyonke imikhiqizo yensimbi yensimbi yokunemba yensimbi ingaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi eqinile.
- Isevisi yokuveza i-OEM ingaqinisekisa ukuthi uthola imikhiqizo oyifunayo, ukusekela i-DDP, i-CIF, i-FOB nezinye izindlela zokukhokha ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende angazithola izimpahla ngokuphepha.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokukhiqiza izingxenye zensimbi ezinyathela ngokunemba.
- I-Ouzhan inemishini engaphezu kweyishumi nambili yokucubungula, izinsizakalo ezihlanganisiwe, imigqa ejwayelekile yokukhiqiza, futhi iza nezitifiketi ezibonakalayo kanye nemibiko yokuhlolwa komkhiqizo.
Langaphambilini Izingxenye zensimbi zensimbi ezipholisha izingxenye
Olandelayo: Izingxenye zensimbi yensimbi yangokwezifiso
Kwenziwe ngentando zethusi mechanical ukuvula izingxenye proce ...
Inqubo ephothiwe yomnyango newindi ye-aluminium ...
6016 aluminium ingxubevange ukwelashwa ukushisa CNC machinin ...
Ekubunjweni aluminium ingxubevange izingxenye